ह्वात्तै बढ्यो तरकारी र फलफूलको भाउ, कुन तरकारीको मूल्य कति ?
सोमबार, ३० आषाढ २०७६,	आहाखबर	2.45K
केही दिनदेखिको अविरल वर्षाका कारण काठमाडौंमा तरकारीको भाउ ह्वातै बढेको छ । बाढी पहिरोका कारण सडक यातायातमा असर पुगेपछि ढुवानीमा समस्या तथा भारी वर्षाले तरकारी खेतीमा पुर्याएको असरका कारण तरकारीको भाउ बढेको हो ।
भारतबाट आउने तरकारीमा पनि विषादी परीक्षणको विषयमा तनाव भएपछि स्थानीय तरकारी मात्र बजारमा आपूर्ति हुँदा भाउ बढेको कालीमाटी स्थित तरकारीका बजारका व्यापारी बताउँछन्। वर्षातपछि बजारमा पहिलेजति धेरै तरकारी नआएको व्यापारी सूर्य लामाले बताए ।
कुन तरकारीको भाउ कति छ ?
४० रुपैयाँ प्रतिकिलो रहेको घिरौँला ९० रुपैयाँ पुगेको छ भने ५० रुपैयाँ प्रतिकिलो रहेको भिडेखुर्सानी ९० रुपैयाँ पुगेको छ । ७० देखि ८० रुपैँया प्रतिकिलो रहेको काँक्रो ४० रुपैयाँ बढेर १ सय २० रुपैयाँ प्रतिकिलो पुगेको छ । ५० रुपैयाँ प्रतिकिलो रहेको बन्दागोपी ३० रुपैयाँ बढेर ८० रुपैयाँ पुगेको छ ।
यस्ताे छ फलफूलकाे बजार भाउ